ကျွန်တော့် ဘ၀ဇာတ်ခုံ: ပျောက်ဆုံးသွားသော ဂရုစိုက်မှုများ
ဟောင်ကောင်မှာဆိုရင် ဖုန်းကိုဖက်ရှင်တစ်ခုလိုပဲ version အသစ်ထွက်တာနဲ့ အပြိုင်အဆိုင် ၀ယ်ကြပြီ။ ဒီက apple ဆိုင်တွေမှာ ဆိုရင် လူတန်းရှည်ကြီးနဲ့ တန်းစီပြီးတောင် ၀ယ်ကြတာ.
ပြီးတော့ မောင်မျိုးပြောသလိုပဲ သက်မဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုပဲ ဂရုစိုက်နေကြတာ...
Mg Goldfish said...
I agree with you. If I face this situation when I go out for friend gathering, I simply tell them to stop looking at their phone.
But I also do the same when I am alone on the train..
အဟီး........... သေချာတာပေါ့။ ငါလည်းအဲ့လိုပဲ (တခါတခါ) တွေးမိပါတယ်ဟ။ ဒါပေမယ့် လူက အဲ့သည် အပြားလေးပေါ်က စိတ်က ခွာမရနိုင်တာ... အဲ့လိုဖြစ်နေတာ။ ခုတော့ လျော့လိုက်ပါပြီ။ မပွတ်တော့တာ ဖေစ့်ဘုတ် ပိတ်လိုက်ကထဲကပါပဲ။ ပြန်ဖွင့်ရင်တော့ ပြန်ပွတ်မှာပေါ့။
တကယ့်တကယ် ဆိုရင်တော့.... ကိုယ့် လက်တွေ့ ဘ၀ ဘေးကလူနဲ့ .. အတုအယောင် ကမ္ဘာ ထဲက လူတွေနဲ့(အဲ့လိုပဲ ပိုးစိုးပက်စက် ပြောပါရစေ) ချိန်ခွင်လျာညှိပြီး နေနိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပါ။ လက်တွေ့ ဘေးမှာ ရောက်လာတဲ့လူကိုမှ တန်ဖိုးမထားနိုင်ဘူး ဆိုရင်တော့.. ဒါ သိပ်သဘာဝ မကျဘူးလို့ ပဲ ထင်ပါတယ်။ ကိုယ်လည်း သဘာဝကျအောင် ကြိုးစားနေပါတယ်ခမျ။ :D :D :D
မောင်မျိုးရေ... အမှန်ပဲ... နောက်ဆို စကားတောင် သေချာပြောတတ်ကြတော့မလားနော်... သားက သူ့ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းက ipadဆိုလို့အဲဒီတုန်းက တော်တော်ကို ရှင်းပြလိုက်ရသေးတာ... နောက်ဆုံးအပိုဒ်ကတော့ ဒီကအမကြီးကို တမင်ကို စောင်းရေးထားသလိုပဲနော်... မဆက်သွယ်ဖြစ်ပေမယ့် အမြဲသတိရနေပါတယ် မောင်မျိုးရေ... ဘာကြောင့်အကြာကြီး မဆက်သွယ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကို အမအီးမေးလ်ပို့ လိုက်ပါ့မယ်... ဒါဆို မောင်မျိုးနားလည်သွားမှာပါ... အမသတိရနေတယ်ဆိုတာ မောင်မျိုးအကို သိပါတယ်... မယုံရင်မေးကြည့်ပါ... ခုတော့ဘလော့ပေါ်ပြန်ရောက်ပြီဆိုတော့ မကြာမကြာလာဖြစ်မှာပါ... အစစ အဆင်ပြေပါစေ
ကိုယ်တော့ ပွတ်စရာ ဘာမှ မရှိဘူး။
ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ ဂရုစိုက်မှုတွေအကြောင်းတော့ စိတ်ထဲငြိမ်ငြိမ်လေးစိုက် တွေးနေမိတယ်.....။
ခေတ်ရေစီးကြောင်း တိုးတက်မှုကြောင့် တစ်ဖက်မှာဆုံးရှုံးမှုတွေလည်း လိုက်လျောညီထွေစွာနဲ့ ဟန်ချက်ညီညီ ပြောင်းလဲနေတယ်။ ကောင်းမှု မကောင်းမှုဆိုတာ ဒွန်တွဲလျှက်ပေါ့ မောင်မျိုးရေ...
အဲဒီ ပွတ်တဲ့ကိစ္စ အမလဲ ပြောချင်နေတာ ကြာပေါ့။ ဘိလပ်မှာတုန်းကတည်းက ရထားပေါ် ဘတ်စ်ပေါ် လူတိုင်းနီးပါး ပွတ်နေကြတာ မြင်လို့ ကိုယ်က စိတ်ထဲ အပြစ်တင်မိတာ။ အခု ဒီလဲကျရော အသက် ၈ နှစ် ၉ နှစ်ကလေးတွေကအစ ပွတ်နေကြတော့တာပဲ။ အရင်လို ပြေးလွှားကစားတာတွေ တောင် နည်းလာပြီ။
နည်းပညာတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ ဆုတ်ယုတ် ဆုံးရှုံးမှုတွေကလည်း မနည်းဘူး မောင်မျိုးရေ ... ။ ဉာဏ်နဲ့ချင့်ချိန်မှ ... ။
မရှိမကောင်း ရှိမကောင်းကြီးပါ မောင်မျိုးရေ...။ ခံစားချက်တွေ တဖြည်းဖြည်းပါးလျလာနိုင်တာ သတိပြုလာတယ်..။
ကိုယ်တွေလည်း တစ်ယောက်တည်း ရထားစီး၊ကားစီးရ
တယ်....:))) ဘာပဲပြောပြော လူမှုဆက်ဆံရေးနယ်ပယ်
မှာ ခေတ်မှီလောကဓာတ်ပစ္စည်းတွေကြောင့် နွေးထွေးမှု
တွေ ပျောက်ဆုံးတာကတော့ အမှန်ပဲရယ်....။
ဟင်းဟင်းဟင်း .. စောင်းမြောင်းပြောဆိုခြင်း သည်းမခံပါ ..။
သူငယ်ချင်းတွေ ဆုံဖြစ်ရင် ဟေး ဓါတ်ပုံရိုက်မယ်ဆိုပြီး အားလုံး ပြုံးပျော် လက်တွေထောင် ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး သွားတာနဲ့.. အားလုံး မောင်မျိုးပြောသလိုပဲ ပွတ်နေကြလိုက်တာ.. သူငယ်ချင်းတွေ ဆုံရတာ ခုတော့ ခံစားချက်လျော့လာသလိုပဲ။ အဲဒီလို ဖြစ်နေတာ ခံစားလို့ မရဘူး ပြောဖြစ်ရင်း အခုတော့ တို့ ငယ်သူငယ်ချင်းတွေဆုံဖြစ်ကြရင်..လူစုံတာနဲ့ အားလုံး ပိတ် တဲ့ သဘော တူညီမှု ရထားတယ်..